Muhiimadda Wax Aqriska Iyo Hababka La Isku Jeclaysiin Karo - Daryeel Magazine
Muhiimadda Wax Aqriska Iyo Hababka La Isku Jeclaysiin Karo
Aqrisku wuxuu ka qeybqaataa baabi’inta ama ka takhalusidda jahliga
Kala ogaansha waxa ay diintu kuu baneysay iyo waxa kale.
Kordhisaa caqliga iyo garaadka
Waxaa laga faa’iideystaa khibradaha qoraaga
Kugu kaalmeysaa Kala ogaanshaha waxa fiican iyo waxa liita
Qofka wax aqriya waxaa adag in laga guuleysto maxaa yeelay macluumaad badan ayuu ogyahay.
Aqrisku wuxuu kugu saacidi in ay luqadaada kororto
Umad aanan garaneyn xiligeedii hore, ma fahanto xiliga ay ku jirto iyo mustaqbalkeedaba.
Mar kasta uu aqriskaaga kordhaba waxaad u dhawaan bu’da cilmiga waxadna ka fogaaneysaa bu’da jahliga. Mid kamida culumada islaamka wuxuu yiri “ waxa aan ka bartay aqrinteyda xorta ah kama baran midda aan ku qasbanaa iskuulka ee aheyd aqrinta buugtii aan baraneyey”.
Iimaankaaga oo saa’ida marka aad aqrisid kitaabka quraanka.
Sidee Caado Loo Dhigtaa Wax Akhrinta? Sidee Se La isku Jeclaysiin Karaa? Sidee Caruurta Loo Jeclaysiin Karaa Wax Akhriska? Wax Ka Baro Hababka Looga Hortago Guuldarada